विवाह गरेकी महिलालाई काँचका चुरा लगाउनु शुभ,साउनमा किन लगाईन्छ हरिया चुरा ? « गोर्खाली खबर डटकम
विवाह गरेकी महिलालाई काँचका चुरा लगाउनु शुभ मानिन्छ । नयाँ दुलहीको चुराको आवाजले उनको उपस्थितीको आभासलाई थाहा पाउन सकिन्छ । अझै विशेष गरेर नवविवाहित महिलाहरुले काँचको चुरा लगाउने गरेका छन् । माइति घर छोडेर पराइ घरमा आउँदा एक किसिमको खल्लोपन आउँछ । तर, चुराले एक्लोपनलाई थोरै भए पनि भगाउन मदत् गर्छ ।
२. हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन : जन्मदिनको दिन भुलेर पनि गर्नै नहुने काम भनेको हत्या हिंसा हो । विशेषत: जन्मदिनको सेलिब्रेसन गर्ने नाममा पशु चौपायाको ह त्या गर्ने, मासु खाने, आफन्त साथीभाई बोलाएर भोज लगाउने प्रचलन नै छ । तर यो सबैभन्दा ठुलो भुल हो । जतिसुकै पुजा पाठ गर्नुस् धर्मकर्म गर्नुस् यदि जन्मदिनको दिन पशु चौपायको हत्या गर्नुभयो भने जिवनमा ठुलो उन्नतिको अपेक्षा राख्दै नराख्नुस् । जिवनमा धेरै उतारचढाव आइलाग्छ । हुन त पशु चौपायाको ह त्या गर्नु पाप नै हो तर जन्मदिनको दिनमा चाही भुलेर पनि यो गल्ति नगर्नुहोस् ।
४. तितो बचन नगर्नुस् : जन्मदिनको दिन कसैलाई पनि तितो बचन नगर्नुस् । जन्मदिनको दिन सबैलाई खुसि बनाउने प्रयास गर्नुस् । कससँग पनि बादविवाद र झगडा नगर्नुस् । सुमधुर बोल्ने प्रयत्न गर्नुस् । सकेसम्म त सधै नै सुमुधुर बचन गर्नु राम्रो हुन्छ तर जन्मदिनको दिन विशेषत सबैलाई हँसाउने प्रयत्न गर्नुहोस् ।
चीनबाट छिमेकी राष्ट्रहरूको लागि जलसंकट
बिराटकी श्रीमती अनुष्कालाई मन परेन सलमानको यस्तो फोहोरी हर्कत
चीनमाथि कठोर कारबाहीको माग गर्न विश्वव्यापी कार्यकर्ताहरू रोम जी२० मा भेला हुन्छन्